Ahoana ny fomba hamoronana sary manaitra amin'ny tantara Instagram. Martech Zone
Instagram dia manana mpampiasa maherin'ny 500 tapitrisa isan'andro, izay midika farafahakeliny ny antsasaky ny tobin'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ny Instagram na mamorona tantara isan'andro. Instagram Stories dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra azonao ampiasaina hifandraisana amin'ny mpihaino kendrena anao noho ireo fiasa tsy mampino izay miova hatrany. Araka ny antontan'isa, 68 isanjaton'ny millennial no milaza fa mijery Instagram Stories izy ireo.
Miaraka amin'ny isan'ny mpampiasa manaraka ny namana, ny olo-malaza ary ny orinasa, azontsika atao ny mihevitra fa mpampiasa maro no mandany afa-po amin'ny fandraharahana sy zavatra hafa rehetra atolotry ny sehatra. Raha te hampifandray sy hisarika ny mpihaino anao dia mila manao izany ianao mamorona tantara Instagram mahasarika miavaka amin'ny fahitana izany. Ireto misy torohevitra enina famolavolana valo izay afaka manampy anao hamorona tantara Instagram manaitra, mahavariana ary mahasarika kokoa.
Mampiasà sary mihetsika
Araka ny antontan'isa, mazàna 38% isan-jato ny fandraisana anjara amin'ny horonan-tsary raha oharina amin'ny sary. Noho izany, raha tsy mahasarika ny mpihaino anao ianao ao anatin'ny efatra segondra voalohany hijerena dia mety hahafoana ny fahalianan'izy ireo tanteraka. Manampy sary mihetsika amin'ny sarinao dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hampidirana ny hetsika sy hitazomana ny mpijery anao hirotsaka.
Na izany aza, raha tsy manana atiny video ianao, dia azonao atao ny manampy sary mihetsika amin'ny sarinao na mamorona sary mihetsika hafa. Ny Instagram dia misy fitaovana inbuilt azonao ampiasaina, toy ny galeriana GIF tsy voafetra na tononkira mihetsika. Ankoatr'izay, azonao atao koa ny mampiasa antoko fahatelo Fitaovana Instagram ho an'ny vokatra tsara indrindra ao amin'ny media sosialy.
Azonao atao ny mampiasa Instagram Stories amin'ny fomba maro samihafa. Manomboka amin'ny fizarana fiasa vaovao ka hatramin'ny fampiroboroboana ireo bilaoginao vaovao, ireo tantara ireo dia manome anao fomba tsy mampino hifaneraserana amin'ny tsenanao kendrena nefa tsy anaovanao poloney toa ny sakafonao. Midika izany fa afaka maka sary ao ambadiky ny seho ianao, sary smartphone, ary horonan-tsary mivantana nefa tsy manahy raha toa ka mameno ny atiny hafa anananao izany. Na eo aza izany, raha ny sary momba ny tantaranao Instagram dia mila mahazo antoka ianao fa mamorona endrika manintona hita maso izay manintona ny mpijery anao. Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahatratrarana izany dia ny fampiasana tabilao handrafetana ny tantaranao alohan'ny hiaingany amin'ny famolavolana.
Ny tabilao iray dia manampy anao amin'ny drafitra ny atiny mety handefasana sy handaminana ny atiny amin'ny fomba tianao haseho azy. Manampy amin'ny fiantohana fa mandeha tsara ny tantaran'ny Instagram anao ary mitazona ny mpijery anao hirotsaka hatrany. Ilaina ihany koa ny tabilao fanaovana tantara raha toa ka matetika no apetaho amin'ny rakitsoratrao ny tantaranao satria miantoka ny fiorenan'ny fitantaranao izany.
Ampidiro ny Photography
Ny tantaranao Instagram dia tsy voatery hahitana endrika sary mahazatra fotsiny. Azonao atao ny mamadika azy ireo ary mampiditra sary indraindray. Ny zavatra tsara indrindra momba ny tantara Instagram dia ny zavatra rehetra avoakao dia tsy voatery noforonina ho matihanina na avo lenta. Fa kosa, azonao atao ny mampiasa ny fakantsarin'ny finday avo lenta mba hakana sary any ambadika any amin'ilay fampiharana. Ankoatr'izay, misy safidy sary an-tapitrisany maimaim-poana azo ampiasaina koa. Mila misafidy ny sary mifanaraka amin'ny atiny zarainao sy mifandraika amin'ny orinasanao na ny marikao fotsiny ianao.
Ampiasao ny loko sy ny endrik'ireo marikao
Rehefa mivarotra ny orinasanao na ny vokatrao dia mila mitazona izay rehetra novolavolanao tamin'ny marika ianao, anisan'izany ny tantaranao Instagram. Noho izany, mila manana a ianao kit feno feno vonona amin'ny fotoana rehetra handeha miaraka amin'ny sary famantarana, endritsoratra ary kaody hex, ankoatry ny zavatra hafa. Ny fampidirana ny lokon'ny marika sy ny endritsika dia manampy betsaka amin'ny fanekena ny marika, indrindra rehefa mihodinkodina ireo tantara ny mpihaino anao. Ny fifikirana amina paleta miloko manokana amin'ny tantaranao Instagram dia zava-dehibe amin'ny fitadidy ny fahatsiarovana marika. Na inona na inona fanorenanao marika manokana, na anananao orinasa, ny fitazonana ny volon-doko misy anao hatrany no tena ilaina. Ampiasao amin'ny fomba hendry sy matihanina ny paleta fandokoana mba hanatsarana ny fisehoan'ny sary Instagram sary. Raha vantany vao mahita ny sary an-tsary ireo mpijery anao dia afaka mahafantatra ho azy fa an'ny fikambanananao izy ireo nefa tsy mahita ny anaranao akory.
Manampia aloka an-tsoratra
Mila mamorona amin'ny fananana famoronana anaty fampiharana nomen'ny Instagram ianao hamoronana sary mahaliana ho an'ny tantaranao Instagram rehetra. Azonao atao ny mampiditra aloka an-tsoratra ao amin'ny solaitrabe famoronana tantara amin'ny alàlan'ny fampidirana sosona roa misy loko samihafa amin'ny lahatsoratra iray ihany. Azonao atao ny manatratra izany amin'ny fanoratana ny lahatsoratrao amin'ny alokaloka maizina kokoa na maivana kokoa ary avy eo apetraho eo ambonin'ilay aloka izy amin'ny alàlan'ny zoro kely. Ity tendrony ity dia fomba mampientam-po hanampiana lahatsoratra eo an-tampon'ny horonantsary na sary azonao amin'ny fampiharana, manamora sy haingana ny famoronana ny tantaranao Instagram alohan'ny hamoahana azy.
Mamorona Overlay sy fiaviana
Ny fitaovana fanaovana sary navoakan'ny fampiharana Instagram dia afaka manao zavatra bebe kokoa noho ny fanasongadinana sy fandokoana ny lahatsoratra amin'ny tantaranao. Ity fitaovana tsy manam-paharoa ity dia afaka manampy anao amin'ny famoronana loko miloko sy fiaviana izay manatsara ny fisehon'ny tantaranao. Raha mikasa ny hizara fampandrenesana manan-danja amin'ny tantaran'ny Instagram ianao nefa tsy mahita sary hampiasaina, dia azonao atao ny manokatra ny fitaovan'ny penina, mahita ny lokon'ny background tianao ary avy eo dia tsindrio ary tazomy mandra-pitodian'ny efijery iray manontolo io loko io.
Ankoatr'izay, afaka mamorona loko misimisy ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay fitaovana manasongadina ny fizotrany mitovy. Azonao atao ihany koa ny mamorona sombin-tsolika sasany amin'ny alàlan'ny fampidirana loko any ambadiky ny sarinao ary ny famindrana ilay fitaovana famafana hamongorana ny sasany amin'ireo loko sy hanatsara ny sarinao. Raha mila fiafiana namboarina natao ho matihanina ianao dia afaka manatona mpanangana tranokala afaka manao izany ho anao. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba azy ireo ianao eto, raha tsy mahazo aina ianao raha manao izany.
Mampiasà GIF sy sticker
Ny tantaran'ny Instagram dia manome anao karazana sticker sy safidy GIF maro isan-karazany mba hitondra fahatsapana fomba sy vazivazy amin'ny volavolanao. Azonao atao ny mitady zavatra manokana na mivezivezy amin'ireo safidy isan-karazany hanampiana ny tantaranao Instagram. Misy karazana style icon, ary azonao atao koa ny mampiditra sticker, Q & As, quiz, ary poll mba hanatsarana ny fisehoan'ny masonao ary hihazonana ny mpihaino anao hirotsaka. Azonao atao ihany koa ny mamorona sy mandefa ny GIF sy ny sticker-nao mba hanampin'ny mpijery ny tantarany na hanomezana fidirana mora amin'ny marikao.
Ny famoronana tantara Instagram mamorona sy manintona dia ampahany lehibe amin'ny orinasanao na marika manokana. Na mpanao sary, mpaka sary, mpaka sary, na mpandraharaha orinasa kely ianao, ny famoronana tantara Instagram tsara sy miavaka dia afaka manampy anao hampiely ny hafatra amin'ny fahaizanao tsy mety lavorary ary hampiseho ny asanao amin'ny mpihaino lehibe kokoa. Ireo torohevitra noresahina tetsy ambony dia afaka manampy anao mamorona sary avo lenta izay hisarika ny mpijery anao amin'ny tantaranao Instagram rehetra.
Tags: sary mihetsika gifsary mihetsika gifsgifsTorohevitra marketing amin'ny instagraminstagram storiestantara tantara instagrammarika momba ny tantara instagramendritsoratra tantara instagramMiparitaka ny tantara Instagramsary tantara instagramsticker amin'ny tantara instagramAloky ny lahatsoratra tantara instagramsolaitrabe instagramstoryboardsary
Hardik Oza dia mpikirakira SEO manana traikefa mihoatra ny 9 taona. Manampy ireo orinasa hampandroso ny orinasany izy. Mizara ny eritreriny amin'ny famoahana fanampiny toa ny SEMrush, Search Engine People, ary ny media sosialy ankehitriny izy. Araho izy ao amin'ny Twitter @Ozaemotion.
Atsaharo ny fanavaozana ny taona an-tserasera amin'ny tranokalanao WordPress miaraka amin'ity kaody fohy ity